Legionnaires' disease (လီဂျီရိုနယ်ရီရောဂါ) - Hello Sayarwon
Legionnaires' disease (လီဂျီရိုနယ်ရီရောဂါ)
Legionnaires’ disease (လီဂျီရိုနယ်ရီရောဂါ) ကဘာလဲ။
ကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။ လီဂျီယိုနယ်လားလို့ခေါ်တဲ့ဘတ်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
လူတစ်ဦးကနေ တစ်ဦးကိုမကူးစက်နိုင်ပါဘူး။ လူအများစုမှာ ဘတ်တီးရီးယားကိုရှူရှိုက်မိခြင်းကြောင့် ရောဂါရသွားပါတယ်။ အသက်ကြီးသူတွေ၊ ဆေးလိပ်သောက်သူတွေနဲ့ ခုခံအားနည်းနေသူတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။
လီဂျီယိုနယ်လားဘတ်တီးရီးယားက တုပ်ကွေးနဲ့အလားတူတဲ့ဖျားနာခြင်းမျိုးကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆုတ်ရောင်ခြင်းသက်သက်ဒါမှမဟုတ်ဖျားနာခြင်းသက်သက်
သို့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့လည်း တစ်ခါတစ်လေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖျားနာခြင်းသက်သက်ဆိုရင်တော့ သက်သာသွားလေ့ရှိပေမယ့် လီဂျီရိုနယ်ရီရောဂါကိုမကုသဘူးဆိုရင်တော့ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရနိုင်ပါတယ်။ ပဋိဇီဝဆေးတွေနဲ့ချက်ချင်းကုသမှုပေးခြင်းက သက်သာပျေက်ကင်းစေနိုင်ပေမယ့် လူအချို့မှာတော့ ကုသမှုအပြီးမှာ ဆက်ဖြစ်ုနိင်ပါသေးတယ်။
Legionnaires’ disease (လီဂျီရိုနယ်ရီရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာ အဖြစ်နည်းတဲ့အထဲမှာတော့ မပါပါဘူး။ အဖြစ်နည်းတယ်လို့သတ်မှတ်ထားကြတာက ဖြစ်ပွားတဲ့အများစုက ရောဂါဖြစ်မှန်းမသိတတ်ကြပြီး ရောဂါကိုသိထားတဲ့အများစုမှာလည်း ပြည်သူ့ကျန်းမားရေးသက်ဆိုင်သူတွေဆီ သတင်းမရောက်တာမျိုးကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါအဖြေရှာရှာခြင်း၊ သတင်းပို့ခြင်းမရှိခြင်းက ရောဂါကိုခန့်မှန်းရခက်စေပြီး ဖြစ်ပွားမှုကိုများစေပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Legionnaires’ disease (လီဂျီရိုနယ်ရီရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
လီဂျီရိုနယ်ရီရောဂါ ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
လီဂျီရိုနယ်ရီရောဂါက ဘတ်တီးရီးယားကူးစက်ခံရပြိး ၂ရက်ကနေ၁၀ရက်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ အောက်ပါလက္ခဏာတွေနဲ့ စဖြစ်တတ်လေ့ရှိပါတယ်။
အဖျား104 F (40 C) သို့အထက်ရှိခြင်း
မူးဝေခြင်းအော့အန်ခြင်းနဲ့ ဝမ်းလျှောခြင်းကဲ့သို့သော အစာအိမ်အူလမ်းကြေင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ
အဆုတ်ကိုအဓီကသက်ရောက်မှုပေးပေမဲ့ နှလုံးအပါအဝင်ခန္ဓါကိုယ်အခြားအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ထိခိုက်အနာတွေကိုလည်း ကူးစက်နုင်ပါတယ်။ ရောဂါရဲ့မပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေမှာ ဖျားခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ ကြွက်သားနာခြင်းတွြေဖ်စ်နိုင်ပါတယ်။
ဖျားနာခြင်းက အဆုတ်ကိုမကူးစက်စေပါဘူး။ လက္ခဏာတွေက နှစ်ရက်ကနေငါးရက်အတွင်း သက်သာသွးပါတယ။်။
ဘတ်တီးရီးယားကူးစက်ခံနေရပြီလို့ထင်ရင် ဆရာဝန်နဲ့ပြသသင့်ပါတယ်။ တတ်နိုင်သမျှမြန်မြန်ရောဂါအတည်ပြု ကုသမှုပေးခြင်းက အမြန်ဆုံးသက်သာစေနိုင်ပြီး နောက်ဆက်တွဲရလဒ်တွေကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ကူးစက်နိုင်ချေများတဲ့သူတွေအတွက် ချက်ချင်းကုသမှုပေးခြင်းက အရေးကြီးပါတယ်။
Legionnaires’ disease (လီဂျီရိုနယ်ရီရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
လီဂျီရိုနယ်ရီရောဂါ ရောဂါအများစုဖြစ်ပွားရခြင်းအကြောင်းရင်းက လီဂျီယိုနယ်လား နျူမိုဖီးလီးယား ဘတ်တီးရီးယားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘတ်တီးရီးယားက မြေကြီးနဲ့ရေထဲမှာ ရှင်သန်နေထိုင်ပေမဲ့ ကူးစက်စေတာရှားပါတယ်။ အိမ်တွင်းမှာဆိုရင် ရေနွေးစိမ်ကန်၊ လေအေးပေးစက်နဲ့ စတိုးဆိုင်တွေက နှင်းဖြန်းဘူးတွေမှာ ပွားများနေနိုင်ပါတယ်။
အိမ်တွေရဲ့ရေပိုက်ဆက်မှုစနစ်တွေမှာ ဘတ်တီးရီးယားတွေပေါက်ဖွားမှုတွေဖြစ်နုင်ပေမယ့် အများစုက အဆောက်အအုံကြီးကြီးတွေမှာဖြစ်ပွားပါတယ်။ ဘတ်တီးရီးယားတွေ ပိုမိုလွယ်ကူစွာကြီးထွားပြန့်ပွားန်ုငိတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Legionnaires’ disease (လီဂျီရိုနယ်ရီရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
လီဂျီရိုနယ်ရီရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက အဆုတ်ကိုပျက်စီးစေနိုင်ပြီး အဆုတ်ကိုအမျိုးမျိုးသောကူးစက်ပိုးတွေ ဝင်စေနိုင်ပါတယ်။
ခုခံအားကျဆင်းမှုအေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါကြောင့် ဒါမှမဟုတ် ခန္ဓါကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအစားထိုးကုသမှုအပြီး ထိုအစိတ်အပိုင်းကိုခန္ဓါကိုယ်မှ ငြင်းပယ်ခြင်းကိုတားမြစ်ပေးတဲ့ဆေးတွေ ကော်တီကိုစတီးရွိုက်ကဲ့သို့သောဆေးတွေကြာင့် ခုခံအားကျဆင်းနေခြင်း
အဆုတ်အတွင်းလေခိုခြင်းကဲ့သို့သော နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါ ဆီးချိုကျောက်ကပ်ကင်ဆာကဲ့သို့အခြားပြင်းထန်တဲ့ရောဂါများ
လီဂျီရိုနယ်ရီရောဂါက ဖြစ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်တတ်ပြီး ကူုးစက်ပိုးတွေအလွယ်တကူပြန့်ပွားနိြုင်ပီး ကူးစက်ပိုးတွေကိုအလွယ်တကူလက်ခံနိုင်တဲ့လူနာတွေရှိရာ ဆေးရုံနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဂေဟာတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Legionnaires’ disease (လီဂျီရိုနယ်ရီရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အခြားအဆုတ်ရောင်ရောဂါအမျိုးအစားတွေနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ လီဂျီယိုနယ်လားဘတ်တီးရီးယားမှန်း လျင်မြန်စွာသတ်မှတ်နိုင်ဖို့ ခုခံအားတုန့်ပြန်မှုကိုစြဖ်စေနိုင်တဲ့ လီဂျီယိုနယ်လားပဋိလှုံ့ပစ္စည်းတွေကို ဆီးထဲပါမပါစစ်ဆေးခြင်းနည်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါစမ်းသပ်နည်းတွေကို အသုံပြုနိုင်ရုနိင်ပါတယ်။
ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း လီဂျီရိုနယ်ရီရောဂါမှန်း အတည်မပြုန်ုင်ပေးမယ့် အဆုတ်ကိုကူးစက်ပိုးဝင်နေတဲ့အတိုင်းအတာကို ပြပေးနိုင်တယ်။
သလိပ်သို့ အဆုတ်တစ်ရှူးနမူနာယူပြီး စစ်ျေဆးခြင်း
မရေမရာဖြစ်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်ရခက်ခြင်းကဲ့သို့သော အာရုံကြောဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေပြခဲ့မယ်ဆိုရင် ဦးနှောက်စီတီစကန်ရိုက်ခြင်းသို့ ကျောရိုးအရည်ဖောက်ခြင်း
Legionnaires’ disease (လီဂျီရိုနယ်ရီရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ပဋိဇီဝဆေးတွေနဲ့ ကုသမှုပေးပါတယ်။ ကုသမှုစောစောပေးလေ နောက်ဆက်တွဲရလဒ်တွေနည်းလေ သေဆုံးုနိင်ချေနည်းလေဖြဖစ်ပါတယ်။ ကိစ္စအများစုမှာ ကုသမှုက ဆေးရုံတက်ဖို့လိုပါတယ်။ ဖျားနာခြင်းက ကုသမှုမလိုဘဲသက်သာပျောက်ကင်းနိုင်ပြိး နောက်ဆက်တွဲတွေလည်း မဖြစ်စေပါဘူး။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက လီဂျီရိုနယ်ရီရောဂါ ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် လီဂျီရိုနယ်ရီရောဂါ ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
လီဂျီရိုနယ်ရီရောဂါ ပြန့်ပွားမှုမဆိုးရွာေးအာင် ကာကွယ်နိုင်ပေမယ့် ကာကွယ်မှုမှာ အသေးစိတ်သန့်ရှင်းစေခြင်း၊ ရေစမ်းများ၊ ရေကူးကန်များမှရေများကိုပိုးသတ်ခြင်း
ဆေးလိပ်မသောက်ခြင်းက ဖြစ်ပွားကူးစက်နိုင်ချေကိုလျှော့ဖို့ သင်လုပ်နိုငတာတွေထဲက အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက ဘတ်တီးရီးယားကူးစက်ပိုးခံရချိန်မှာ ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။
References : Legionnaires’ disease. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/legionnaires-disease/home/ovc-20242041. Accessed July 19, 2017.
How common is Legionnaires disease? http://hcinfo.com/about/legionnaires-disease/how-common-is-legionnaires-disease/. Accessed July 19, 2017.